Football Khabar » लिग लिडर लेभरकुसेनलाई हराउँदै बार्यन शीर्ष स्थानमा : लेवान्डोस्की बने हिरो !
लिग लिडर लेभरकुसेनलाई हराउँदै बार्यन शीर्ष स्थानमा : लेवान्डोस्की बने हिरो !
अघिल्लो दिन मात्रै फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका स्टार फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्कीले इन्जुरी समयमा विजयी गोलका साथ २ गोल गरेपछि जर्मन लिग बुन्डेसलिगामा बार्यन म्युनिखले लिग लिडर बायर लेभरकुसेनलाई हराएको छ । शनिबार राति भएको लिगको १३औं साताको खेलमा बार्यनले लेभरकुसेनलाई उसकै घरेलु मैदानमा १–२ ले स्तब्ध बनायो । इन्जुरी समयमा सम्हालिन नसक्दा लेभरकुसेनले घरमै हार टार्न सकेन ।
अब यो हारसँगै लेभरकुसेनको शीर्ष स्थान गुमेको छ भने बार्यन शीर्ष स्थानमा चढेको छ । लेभरकुसेनलाई शीर्षस्था बचाउन बार्यनविरुद्ध कम्तीमा पनि बराबरी नतिजा आवश्यक थियो । यता, बार्यन भने लेभरकुसेनलाई उसकै घरमा हराएर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउ थियो, जुन पूरा गरेर पनि छाड्यो ।
लेभरकुसेनका लागि खेलको १४औं मिनेटमा प्याट्रिक स्चिकले गोल गरेका थिए । तर, खेलको ४३औं मिनेटमा पाहुना टोली बार्यनले गोल गर्दै खेल १–१ बनायो । सो गोल रोवर्ट लेवान्डोस्कीले थोमस मुलरको पासमा गरेका थिए । उनका लागि यो सिजनको १६औं गोल थियो ।
पहिलो हाफ १–१ मा सकिएपछि दोस्रो हाफको खेल ९० मिनेटसम्म पनि गोलविहीन थियो । तर, थपिएको समयको तेस्रो मिनेटमा लेवान्डोस्कीले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल बार्यनले १–२ ले जित्यो । यसपटक लेवान्डोस्कीले जोसुवा किमिचको पासमा गोल गरेका थिए ।
अब यो हारपछि लेभरकुसेन १३ खेलपछि २८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा झरेको छ भने बार्यन समान खेलपछि ३० अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा चढेको छ । आजको खेलमा गरेको २ गोलसँगै लेवान्डोस्कीले जारी सिजन बुन्डेसलिगामा कूल १६ गोल गरिसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति ५ पुष २०७७, आईतवार ०१:२३